ENUGU: ONYE ISI NDI UWE OJII ETOOLA NDI ENUGU MAKA INUPU ISI… – hoo!haa!!
<img src="http://www.hoohaa.com.ng/wp-content/uploads/2018/09/mohammed-danmallam-696×557-300×240.jpg" alt="" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-2483" />
Onye isi ndi uwe ojii na steeti Enugwu bụ Mazị Mohammed Danmallam, etoola ndi steeti Enugwu maka inupu isi nye iwu ahụ ndi otu IPOB, bụ otu amachiri amachị tiri ka onye ọbụla apụtakwala n'ụlọ ya ụnyahụ bụ Faraidee, abalị iri na anọ nke ọnwa Seputemba anyị nọ n'ime ya.
Onye isi ndi uwe ojii a bunyere ndi Enugwu ụkpa otito a mgbe ọ na-agwa ndi nta akụkọ okwu n'Enugwu ụnyahụ bụ Faraidee, mgbe ya na ndi otu ọrụ nchekwa ndi ọzọ mechaara ngagharị, ịhu ka eke si anya anwụ maka iwu a na steeti Enugwu.
Ndi IPOB nyere iwu onye apụtakwana iji gosiputa iwe ha maka atụmatụ égwu éké ndi agha, agba nke atọ ma gisikwa iwe ha maka ụmụ nwanyị Igbo ndi nke-akpọchiri akpọchị na steeti Imo tinyekwara ogbugbu ana-egbu ndi na-agba mbọ maka nnwere onwe mba Biafra n'akụkụ Naijiria dị iche iche.
Ndi IPOB buru ụzọ depụrụ ọtụtụ ndi otu dị iche iche n'Ọdịda-Ọwụwa Anyanwụ akwụkwọ iji gwa ha ka onye ọbụla mechie ụlụ ọrụ ya nakwa nke azụmahịa ya ma ọnwa Seputemba dị n'abalịi iri na anọ. Ha bikwara akwụkwọ amam ọkwa, madochaa n'akụkụ dịgasị añaa na mpaghara Ọdịda-Ọwụwa-Anyanwụ niile, maka iji gwa ndi mmadụ ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ya ụbọchị ahụ.
Mazị Danmallam kelere ndi Enugwu ka ha si adọnyere ndi ọrụ nchekwa ukwu na steeti ahụ.
Ọ sị, "obi dị m añụrị ikwu na ndi Enugwu, n'ụdị nke ha ji bụrụ ndi ezigbo mba, nuputara n'igwe ka ha si eme mgbe dum ma bịa mere onwe ha mkpa ha"
Ọ gara n'ihu kwue na ya agaala ebe ọbụla, tinyekwara okpuru ọchịchị ime obodo Isiụzọ were hụ na owu na-aga n'anya aga etu o si kwesi ekwesi. Ọ sị n'ozi sitere na ngalaba ụlọ ọrụ ya dịgasị na Nsụka nakwa Ojiriva na-ekwu na njem ụgbọala na nke ndi mmadụ na-aga n'ihu.
Ọ gara n'ihu kwukwa na ha kere ezigbo nkwụcha ịhụ na onweghị ụzọ ndi omekome siri kpagbuta ndi mmadụ n'ụzọ enweghị isi.
Anyị ga-echeta n'ọbụ n'abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Seputemba afọ puku abụọ na iri na asaa, ka ụlọ ikpe ukwu dị n'Abụja kwadoro ikikere ahụ onye isi ala bụ Mohammadu Buhari jiri kwue na IPOB bụ otu amachiri amachi ma bụrụkwa otu ọlụọ ọlaa, nke aka ọrụ ya megidere iwu.
Previous Post: IMI/AJỊ/AHỤ
Next Post: ỤMỤANỤ ỤLỌ (DOMESTIC ANIMALS)